यस्तो पनि हुँदो रैछ अचम्मको प्रेम कहानी, अन्तिम च्याट | onlineharpal.com
यस्तो पनि हुँदो रैछ अचम्मको प्रेम कहानी, अन्तिम च्याट
on: ५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १८:२५ In: कला/साहित्य
” समय एक चक्र हो रे , त्यो भित्तामा झुन्डिएको घडी जस्तै , त्यसरी नै घुमाउरो पाराले फन्को मार्दै छ हामिलाइ , हाम्रो सम्बन्ध र हाम्रो याद लाई पनि । एक पछि दुई र दुई पछि तीन हुँदै बाह्र सम्म पुगेर फेरि एक बाट नै सुरु हुने त्यही भित्ताको घडी जस्तै । उस्तै गोल गोल घुम्ने हाम्रो दैनिकी , हृदय भित्र उछलकुद गर्ने ती छालहरु र परिवर्तित सपनाको चक्र पनि त घडिको सुइ भन्दा कुनै मानेमा भिन्न छैन ।”
यो लामो स्टाटसको अन्तिममा गुड नाइट लेखेर सुत्ने तरखरमा थिए । हातमा भएको मोबाइलले बाह्र बजेको संकेत गरिसकेको थियो । निद्रा भने पटक्कै लागेकै थिएन । बिहानै उठ्नु पर्ने बाध्यता पनि त थिएन , त्यसैले पनि निद्रा देबि ढिलो गरेर नै आउथिन म संग । सायद म संगै सुर्यको प्रकाश ले आखाहरु चुम्दै गर्दा उठ्ने रहर उनको पनि हुदो हो ।
पंखाको हावाले हल्लिएका झ्यालको पर्दाहरु बिचबाट ताराहरुले मलाइ हेरिरहेका थिए । फेसबुकको नोटिफिकेसन रिङ्गले मेरो सुत्ने प्रयासलाइ असफल तुल्याइ दियो । आफैमा रिस पनि उठ्यो । वाइफाइ बन्द नगरेकोमा । मोबाइललाई हातमा लिदै उहीँ ताराहरुलाइ नियाले । ताराहरु उस्तै एकनासले मलाइ नै हेर्दै थिए । बेलाबेलामा पर्दाहरुले छोपी दिन्थ्यो । लुकामारी खेल जस्तै ।
मोबाइल खोले एउटा फ्रेन्ड रिक्वइस्ट र केही लाइकहरु थिए । एकै छिन् अगाडी पोस्ट गरेको स्टाटसमा दस लाइक आइसकेको रहेछ । एउटाले वा वा …. पनि लेख्न भ्याइ सकेको थियो । थ्याङ्स अल लेखेर कमेन्ट गरे । आफ्नै स्टाटसमा ।
रिक्वइस्ट लाई क्लिक गरेर प्रोफाइल खोले । बिनिता थापा , निम्स कलेज काठमाडौंको ठेगाना थियो । पिंक कलरको टिसर्टमा अगाडी ब्ल्याक कलरको एडिडासको लोगो थियो । , हातको बाउलालाई फोल्ड गरेर माथी सम्म पुर्‍याएको । कालो पाइन्टको केही हिस्सा समेत देखिने फोटोमा दायाँ हातले सायद सेल्फी लिइरहेकी थिइन होला । बायाँ हात भने खुम्च्याएर कपाल लाई मुठ्ठी पारेकि थिइन । मिलेको आँखा , कपालको सानो त्यान्द्रो बायाँ आखाको बिचमा झुन्डिएको थियो । कालो आखीभौं । छोटो अनि मिलेको नाक र बोल्दै गरेका जस्ता लाग्ने खुल्ला ओठहरुले मलाइनै सम्बोधन गरेको झै लाग्यो । , मलाइ नै हेर्दै ति आखाहरु टोलायझै लाग्यो । एक छिनलाइ यो तस्बिर हो भन्ने पनि भुलिसकेको थिए ।
लामो कपाल दिब्यमुखी बटुलो मुहारको दुबै पट्टी बाट सल्ल अगाडी छाती हुँदै बग्दै गर्दा सायद उनले यो उत्कृष्ट सेल्फी खिचेको हुनुपर्छ । चिरपरिचित त्यो अनुहार लाई एसेप्ट नगर्नुको म संग कुनै कारण थिएन । त्यसैले एसेप्ट गरे । ” हाइ बिधान ” उताबाट केही सेकेन्डमै म्यासेज आयो । हाइ …. सन्चै छौ ? यतिबेला सम्म पनि नसुतेको ? मैले प्रश्न गरे ।
नोप….. भन्दै डट डट का केही थोप्लाहरुले भरिएको म्यासेज सेन्ड गरिन । ” बिधान मलाइ चिन्यौ ?” उनले सोधिन । ” तिमिलाइ कसरी भुल्न सक्छु , तिमिलाइ त मैले माया गर्थे , प्रेम गर्थे त्यसैले त होस्टेलका दिनहरुमा तिमिलाइ दुखनै दिएर भए पनि म संतुष्ट हुन्थे । जिस्कायरै भए पनि खुसी हुन्थे । तिमी जब रिसाएर आफ्नो ओठलाई जथाभावी चलाउथ्यौ र अनायासै बरबराउथ्यौ म तिम्रै ती ओठहरुमै हराएको हुन्थे ।, तिम्रा ती रिसले भरिएको ओठ र आखामा मैले आफ्नो लागि प्रेम महशुस गरेको हुन्थे । ” यी सबै कुरा भन्न मन थियो । तर सकिन , त्यसैले हासिरहेका इमोजीहरुले नै काम चलाए ।
कहाँ छौ तिमी ? नेपालगन्ज , मैले भने । ए भने पछि गर्मीको राजधानी मै छौ ? अलि ढिला गरि म्यसेज सेन्ड गरिन । मलाइ यो कुराको रिप्लाई दिन पटक्कै मननै लागेन । घडी हेरे एक बजि सकेको थियो । सुत्नु पर्ने निद्रा देबिले पनि बोलाउदै थिइन । ल यार बाइ सि यु ….. अन्तिम म्यासेज सेन्ड गरे । किन बाइ ….? उता बाट म्यासेज आयो । निद्रा लाग्यो नि यार , मैले पनि तुरुन्तै म्यासेज गरे ।
तुरुन्तै एउटा फोटो सेन्ड गरिन । उहीँ एडिडास टीसर्ट , उस्तै आँखा र उहीँ सुन्दर ओठ । यो फोटो भने नजिकै बाट सेल्फी लिएकी हुनुपर्छ । एक छिन कमेन्ट गर्न लाइ शब्दको अभाब खड्कियो । नाइस लेखेर टार्दिए । मात्र नाइस ……. म्यासेज सेन्ड गरिन , साथमा तीन वटा इमोजी पनि संगै थियो , स्याड मुडको ।
ल ल दुखी हुनु पर्दैन तिमी सुन्दर छौ , धेरै राम्री छौ यति राम्री छौ कि म शब्दमा बयान गर्न सक्दैन ।, त्यसैले त ती दिनहरुमा तिमिलाइ लाइन मार्ने कोशिस गर्थे । तिमी फुच्ची हुदा त मैले लाइन मार्ने कोसिस गर्थे अब त तिमी फकृएकी छौ । अझ फुलि सकेकी छौ । अहिले पनि लाइन मार्ने कोसिस मै छु , तर कसरी लाइन मारौ सोच्न सकेको छैन । मैले लामो हासोको हा हा हा….. संगै आफू भित्रको भावना सेन्ड गरे ।
केही ढिला गरि , ” इट्स अ पार्ट्स अफ जोक ” लेखेर सेन्ड गरे ताकी उनी रिसाइन भने फकाउने बाटो बाकि रहोस । मारनत लाइन , के थाहा तिम्रो लाइन को पर्खाइमा पो छु कि , हु नोज फिउचर ? मे बि यु बिल माइ ब्वाइ फ्रेन्ड , उनले सटिक जवाफ फर्काइन । झ्याल देखि बाहिर हेरे उस्तै लुकामारी को शैलीमै तारा र आफु बिच खेल चलिरहेको भान भयो । उनले भनेको गर्मीको राजधानी नेपालगन्जको मौसम पनि चिसो चिसो हुँदै थियो । निद्रा देबिले पनि च्याप्पै समाएर सुत्न आग्रह गर्दै थिइन । तर म भने सि यु बाइ भनेर पनि उनको शब्दमा आफ्नो अतीत र भबिस्यको जोडघटाउ गर्दै थिए । त्यो उनको ब्वाइ फ्रेन्ड भन्ने शब्दले मलाइ रनभुल्लमा परिसकेको थियो ।
कहाँ हरायौ ? कि म मन पर्दैन ? एकै साथ दुई प्रश्न तेस्राइन । म भने अवाक थिए । के भनु उनलाइ । कतै जिस्केकी मात्र पो हुन कि । सजग हुनुनै पर्ने थियो । त्यसैले हा हा … गरेरै टारीदिए । तिमी त सोसल साइटमा थिएनौं नि ? कहिले देखि सुरु गर्यौ त फेसबुक चलाउन । मैले सोधे । भयो एक हप्ता जति , धेरै गालि गरे साथिहरुले फेसबुक खोल भनेर , अनि बिधान भन्ने ले पनि धेरै संग सोधपुछ गर्यो रे के – मेरो कन्ट्याक्ट् नम्बर र फेसबुकको बारेमा । त्यसैले खोलेको उनले मलाइ नै ब्याङ्गे हानेर भनिन ।
म लाचार भए । साच्चिकै मैले उसका नजिकका साथीहरू लाई लगातार दुई बर्ष देखि सोधपुछ गर्दै आइरहेको थिए । कस्ता साली केटीहरु भनिहाल्नु पर्ने झनक्कै रिस पनि उठ्यो । मलाइ भने कहिल्यै कन्ट्याक्ट् नम्बर दिएनन । के तिमी मलाइ अझै पनि मन पराउछौ ? उनको प्रश्न थियो । कस्तो प्रश्न हो मैले बुझ्नै सकिन । उनी त्यही कामना नै हुन त म दोधारमा परे । उनी त लज्जाले आफ्नो सिकार गर्थिन , त्यो भन्दा बढी उनको रिसाउदा फरफर गर्ने ओठ र आखाका चालले शिकार गर्थिन । तर ….. तर आज उनी आफै मलाइ मन पराउछौ भनेर सोध्ने हिम्मत गर्न सक्छिन । यो मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो । म भित्रको सन्देहले मेरो दिमाग सलबलाउन थाल्यो ।
कहाँ छौ तिमी ? कुरा मोड्नलाइ सोधे । ” पागलहरुको बिच ” उनले भनिन र सोधिन् अर्को प्रश्न तिमी के गर्दै छौ ? पागलहरुको बीच ??? के भनेको । तिमी त पहिले जस्तो पक्कै छैनौ । यदि मैले तिमी कामना होइनौं भनेर भने भने , तिमी कसरी रियाक्ट गर्छौ ? त्यो तिम्रो प्रोबलम हो , मेरो होइन । उनको म्यासेजमा मैले गरेको सन्देह प्रतिको केही रिस भरिएको थियो । सरि यार , अनि के पागलको बीच भनेको त ?
साच्चै म पागलकै बिचमा छु । मतलब म मेन्टल हस्पिटलको डिउटिमा छु । उनको म्यासेज संगै जिब्रो टोकेको इमो पनि संगै आयो । हा हा हा गर्दै रिप्लाई गरे । य भने पछि तिमी सिस्टर भयौ । अब त लाइन मार्न पनि गार्हो पर्यो – सिस्टर लाई कसरी लाइन मार्नु , संगै पछि हा हा …. थपे । उता बाट पनि हा हा नै आयो ।
अनि तिमी के गर्छौ ? उनले सोधिन । त्यसै समय किल गर्ने काम । मैले सजिलै जवाफ दिए । सायद यो उमेर मा यो जवाफ दिन त्यति सजिलो भने थिएन । त्यसैले त उनले ओह ! मात्र भनिन ।
एउटा कुरा भनौं , मैले केही सस्पेन्स राखेर सोधे । भन – उनले तुरुन्तै रिप्लाई गरिन । सायद तिमी रिसाउछौ कि ? तिमिले भनेनौ भने चाहिँ पक्कै रिसाउछु । भन छिटो । उनले धैर्यताको सिमा सकिएको सङ्केत गर्दै भनिन । थाहा छ होस्टेल हुदा मैले तिमिलाइ मन पराउथे । मैले धेरै डराएरै म्यासेज सेन्ड गरे । ” अनि अहिले ” उनले तुरुन्तै रिप्लाई गरिन । अहिले पनि……. तर सोचेको थिएन तिमी फेरि म संग कन्ट्याक्ट्मा आउछौ भन्ने । र यो पनि सोचेको थिएनकी तिमी यसरी परिवर्तन हुन सक्छौ भन्ने ।
किन तिमी परिवर्तन हुन सक्छौ भने म हुन सक्दिन ? तिमी बिधान देखि बेकम्मा बन्न सक्छौ भने म कामना देखि फ्र्यान्क हुन सक्दैन ? प्रश्नै प्रश्नको प्रतिउत्तरले मलाइ भाउन्न बनायो । त्यो बेकम्मा शब्दको भारी मैले थेग्न नै नसक्ने भए । मतलब के कुरामा बेकम्मा भए म ??? छिटो छिटो रिप्लाई गर्दा सायद मेरो रिस पनि त्यही शब्दमा पोखिएको थियो कि । सायद उनले बुझिन पनि होला । मेरो रिसको तिखोपन ।
” लाग्थ्यो तिमिले मलाइ प्रेम गर्थ्यौ । कति दिनहरु मैले तिम्रो प्रेम प्रस्तावको आशामा बिताए । तिम्रा ती थर्ड क्लास जोकहरुमा हासे । थप्पड हान्नु पर्ने तिम्रो हरकतमा पनि आखा तरेरै प्रेम गरेकि थिए । तर ….. तर तिमी केही नभनेरै छोडेर हिड्यौ ।” उनको म्यासेजले किबोर्डमा चलिरहेको मेरो हातहरु रोकिए । बिपरित चुम्बकीय शक्ति जस्तै मेरो हातहरु मोबाइलमा जानै सकेन । कोशिस गरे तर शब्दको अभाव भयो । लागेको निद्रा छ्याङ्ग भैसकेको थियो । उताबाट पनि म्यासेज आएन । कामना ईज टाइपिङ्ग लेख्दथ्यो तर दस मिनेट बितिसक्दा पनि म्यासेज भने आएन । न मैले नै गरे ।
ओइ !! निदायौ क्या ? उताबाट म्यासेज आयो । अह…… छैन , मैले भने । किन नबोलेको त ? साच्चै तिमी बेकम्मा नै हौ । यसरी कुनै केटिले यति धेरै हिन्ट दिदा पनि तिमी मौन छौ । तिमिले त मेरो हाइ …. को म्यासेज पछि प्रपोज गर्नु पर्ने हो । जसको लागि तिमिले दुई बर्ष खोज्दै हिड्यौ , आज त्यही केटि तिमिलाइ यसरी हिन्ट दिदै मलाइ प्रपोज गर भन्दै छे । र पनि तिमि ………….. लामो डट डट पछि केही शब्द अधुरै राखिन ।
तिमीले जे सोच्दै छौ त्यो सहि हो । गलत भन्ने ममा हिम्मत छैन । हो मैले मन पराउथे र पराउछु । तिम्रो कन्ट्याक्ट्को लागि दुई बर्ष भौतारिएकै हो । आज अकस्मात तिमी आउनु मेरो लागि नदेखिने इश्वर देखे सरहनै हो । तर तिमिलाइ प्रपोज गरेर कामना इज माइन भन्दै ट्याग भिड्नु र भिडाउनुमा मेरो कुनै दिलचस्पी छैन ।
रिलेसन पछि तिमिले भन्ने लभ यु टु मा भन्दा तिमिले म संग गरेका झगडाहरुमा म प्रेम देख्छु । इरिटेड हुँदा तरेका ती आखामा मैले खुशी पाउछु । शब्दको अन्तिम बोलिमा हु………. गर्दै मुख मोड्दा हल्लिएका कपालको चुल्ठोमा त्यो तिमिले भन्ने लभ यु भन्दा हजार गुणा खुशी महशुस गर्छु । उनले ओह ! संगै हि हि लेखेर सेन्ड गरिन । मैले थम्सअप इमो सेन्ड गरे । र भने अब त पक्का बाइ सि यु मर्निङ लेखेर सेन्ड गरे । उनको रिप्लाई को प्रतीक्षा नगरि मोबाइलको वाइफाइ बन्द गरे । सुते उनै निद्रा देबि संगै जो मलाइ सुत्न कर गर्दै थिइन ।
निद्रा खुलेपछि मोबाइल हातमा लिए । ओहो दस बजि सकेछ । फेसबुकमा न्युज हेर्न मन लाग्यो । अनि सम्झिए रातिको कामना संगको च्याट पनि । झटपट वाइफाइ अन गरे । थुप्रै नोटिफिकेसन थिए । साथमा केही म्यासेज पनि । कामनाको म्यासेजमा आँखा गयो । एक छिन नमज्जा लाग्यो । बाहिर कुकुरहरू भुक्दै थिए । कस्तो भुक्न सकेको दिक्क लाग्दो । उठेर कुकुरलाइ भकुरौ झै लाग्यो । तर उठिहाल्ने जोश भने थिएन ।
फेरि कामनाकै म्यासेज हेरे । जहाँ उनको हरेक एक घन्टाको अन्तरालमा लेखिएको म्यासेज थियो । सायद उनी मेरो अन्लाईन आउनुको प्रतीक्षा गरेकी थिइन होला । हरेक घन्टामा लेखिएको पाँच छ वटा ” ओइ बिधान ” पछि छोटो म्यासेज थियो । ” बिधान ” , केही कुरा भन्नू थियो । बट युजलेस छ । भोलि म सुर्खेत जाँदै छु । सायद ….. । सायद पछिको डट डट मा धेरै कुरा छुपेका थिए । डट डटमा छुपेका कुराहरुले मलाइ नै प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । यो कुरा बुझ्न मलाइ कुनै समय लागेन । हिजो रातिको उसको च्याटमा व्यक्त गरिएका केही शब्द र प्रेम प्रतिको आबेग सम्झिए । त्यसले पनि त्यही कुराको बोध गरायो ।
बाहिर भुक्दै गरेका कुकुरहरू उस्तै गरि भुक्दै थिए । तर मलाइ उनिहरुको भुकाइमा मेरो चीत्कार नजर आयो । मेरै लागि भुके झै लाग्यो । त्यसैले अहिले त्यो भुकाइमा दिक्दारिपन लागेन । चाहन्थे अझै भुकेको हुन । जोडजोड ले भुकेको हुन । ताकी मेरो कानमा गुन्जियको सन्नटा लाई चिरिदिएको होस । रिप्लाई गर्ने ठाउमा “यु कान्ट रिप्लाई टु दिस कन्भर्सेसन ” लेखिएको थियो । उनले फेसबुक आइडि डिएक्टिभ गरिसकेकी थिइन । नोटिफिकेसन मा क्लिक गरे । हिजो रातिको आफ्नै स्टाटसमा आएको लाइक लाई हेरे । पचास प्लस थियो ।
राम कृष्ण ढकाल ले नेपाल आइडोलमा गरे निसान्तकोमात्र खुलेर प्रशंसा, अरुको नाम पनि लिएनन् ।
१० भाद्र २०७४, शनिबार १५:१५
जुठो बराबर चल्नु पर्छ माया गर्ने भए, यहि आगोमा जल्नु पर्छ माया गर्ने भए
७ बैशाख २०७४, बिहीबार १९:२२
पूर्व सांसद शान्ता चौधरी थारु पहिरनमा देखिए पछि
२२ पुष २०७३, शुक्रबार २०:०५
ओठको ९ वटा बनावटबाट थाहा पाउनुस् ब्यक्तिको रहस्य
२२ पुष २०७३, शुक्रबार १३:३५
आफ्नो प्रेमीलाइ भुलेर पनि भन्न नहुने ४ कुरा
२२ पुष २०७३, शुक्रबार १२:०८
साँचो, सत्य र पवित्र प्रेम दर्शाउने यस्तो पो रैछ कमालको तरिका
१८ कार्तिक २०७३, बिहीबार १३:४२
१० आश्विन २०७३, सोमबार २३:१९
तिमी बनेर आफैभित्र बर्सन्थे ती धारिला कथाहरु
१० आश्विन २०७३, सोमबार २३:०६
जीवनबारे पारिजात यसो भन्नु हुन्थ्यो
१० आश्विन २०७३, सोमबार २२:४८